Madaxweyne Obama oo boggaadiyey weeraradii USA ay dhowaan ka fulisay Baraawe iyo Tripoli – Radio Daljir
Oktoobar 10, 2013 3:50 b 0
Washitong, October 10, 2013 – Madaxweynaha Maraykanka Brack Obama ayaa bogaadiyey weeraradii Al-Qaacida ay ka fuliyeen Soomaaliya iyo Liibiya horaantii toddobaadka, xiligaas oo ciidamada USA ay qabteen Anas Alibiy iyo saraakiil kalena ku dileen Baraawe.
Waxaa uu sheegay Madaxweyne Obama in aysan intaas ku afjari doonin weerarada k dhanka ah Argagixisada dunida, balse ay beegsan doonaan meel walba oo lagu sheego in ay xubno joogaan ururka Al-Qaacida.
Madaxweyne Obama ayaa yiri ?Saraakiisha Al-Qaacida waan ku beegsan doonaa meel walba oo ay ka joogaan Afrika iyo dalalka aan awooda u lahayn in ay wax ka qabtaan, sababtoo ah waxay dhibaato ku hayaan aduunka.?
Hugaamiyaha USA waxaa uu xusay in lagu guulaystay howlgalkii lagu qabtay Anas Alibiyi oo ka dhacay bartamaha Tripoli ee dalka Liibiya, isagoo si cad u sheegay in aan natiijo macquul ah laga gaarin weerarkii lagu qaaday degmada Baraawe ee Soomaaliya.
Ciidamada amaanka shabeelaha hoose oo rajo xumo ka muujiyey awooda Al-shabaab ee gobolka